Lalao antoko 21 tsara indrindra ho an'ny olon-dehibe amin'ny 2021 - An-Trano
Indian Celeb Style Fitness Diy Fahasalamana Ara-Tsaina Mpahay Nahatratra Iraisam-Pirenena Marika Momba Ny Herinaratra Vehivavy Mpinamana Sy Fianakaviana Teknolojia
Ny kilalao fety 21 tsara indrindra ho an'ny olon-dehibe hanatsarana ny fanangonana sosialinao manaraka
Mbola mamarana ny lanonam-pisakafoanao amin'ny charade boribory? Yawn. Halalino ny zava-drehetra amin'ny fisafidianana ny lalao fety tsara indrindra ho an'ny olon-dehibe, manomboka amin'ny fihomehezana mafy ka hatramin'ny tetikady matotra. Misy zavatra ho an'ny rehetra ao amin'ny boriborinay (saingy, fantatrareo, angamba aza milalao ny sasany amin'ireo maloto amin'ny reninao). Arosoy ary ny divay, miangona manodidina (an-olona na saika) ary miomàna hifalifaly.
Mifandraika: Lalao karatra ho an'ny olon-dehibe 24 izay hahatonga ny fety manaraka 10 fotoana mahafinaritra kokoa
1. Karatra manohitra ny maha-olombelona
Ity lalao karatra raunchy ity dia hahatonga anao hihomehy amin'ny tany amin'ny fihomehezana rehefa manandrana mifampihoatra ny tsy fankasitrahana ireo mpandray anjara. Isaky ny fihodinana iray dia misy mpilalao iray manontany fanontaniana feno amin'ny blaogy amin'ny karatra mainty (eritrereto: Inona no mahatonga ny zavatra tsy hahomby amin'ny sauna? Na inona ny fahafinaretan'i Batman meloka?) Ary avy eo dia mamaly amin'ny karatra fotsy faran'izay mahafaly azy ireo mpilalao hafa. Mpitsara ny mpilalao avy eo ary mifantina ny valiny tiany indrindra. Nomena anarana hoe lalao ho an'ny olona mahatsiravina ity lalao fety ity, azo antoka fa hihomehezana be ity. (Fanamarihana: Ity iray ity dia azo antoka fa ho an'ny mpanatrika matotra fotsiny - ary raha matotra dia tsy midika hoe ilay nenitoanao Mildred lehibe ianao.)
Vidio io ($ 25)
2. Never Never Ever
Tadidinao angamba fa nilalao ity lalao ity tao amin'ny efitrano fatorianao zatovo. Ankehitriny dia azonao atao ny manohy ny fihomehezana (sy mahamenatra) tsara mandra-pahatongan'ny olon-dehibe. Iza amin'ireo namanao no nandany alina tany am-ponja? Sa manipy zava-pisotro tamim-pahatezerana amin'ny tavan'olona? Mitadiava zavatra tsy fantatrao momba ny namanao amin'ity lalao ity izay ampiasanao karatra hahitanao ny tsiambaratelo lalina sy maizina indrindra an'ny ekipanao. Miaraka amin'ny namanao reninao? Ahintsano miaraka amin'ny fonosana ho an'ny ray aman-dreny ny zavatra.
Vidio io ($ 25; $ 19)
fototra ho an'ny hoditra mitambatra
3. Inona no tadidinao?
Ianao ve ilay olona manototra ny meme ao amin'ny groupe miresaka foana? Miparitaka ve ny nofinofinao indray andro any? (Hey, tsy misy fitsarana.) Ity no lalao ho anao. Amin'ity lalao karatra kolontsaina pop-ity, ny hevitra dia ny hifaninana amin'ny namanao sy ny fianakavianao momba izay afaka mamorona sary mahatsikaiky mahatsikaiky. Toy izao ny fomba fiasan'izy io: ny olona iray mametraka ny sarin'ny sary eo amin'ny kudazy ary ny mpilalao hafa dia mampiasa ny karatra misy ny lohateny (matetika maloto) hamenoana ny meme. Ilay olona manana meme mahatsikaiky indrindra dia mandresy amin'ny fihodinana.
Vidio io ($ 30)
4. Ny Lalao Voting
Manao ahoana tsara ianao tena mahalala ny namanao? Amin'ity fisafidianana risqué ity, ny mpilalao dia angatahana hifidy amin'ireo mpilatsaka hofidina mety hitranga amin'ny toe-javatra mahatsikaiky maro. Ohatra: Iza no hangataka fanampiana aminao raha mila miala amin'ny firenena ianao? Iza no afaka mandresy fampisehoana dragona? Iza no mitsikilo ny telefaona findainy manan-danja tsy tapaka? Diniho ity fitsapana lalao kilalao farany indrindra amin'ny finamananao ity.
$ 25 ao amin'ny Amazon
5. Jereo ny Ya ’Mouth
Angamba ianao nijery olo-malaza nilalao ity lalao ity The Ellen DeGeneres Show. Sa nahita ireo sary hafahafa tao amin'ny media sosialy niaraka tamin'ny olona nanao vava goavambe ianao ary niezaka ny tsy hihomehy? Mampahafantatra ireo mahatsikaiky Jereo ny Ya ’Mouth lalao antoko izay mampiala voly kokoa aza ny fonosana fanitarana olon-dehibe NSFW . Mba hilalaovana dia misy olona mamerina retractor amin'ny takolaka iray ary avy eo manandrana milaza andian-teny maditra izay tsy maintsy hamarinin'ny mpiara-miasa aminy. Tsotra nefa mahatsikaiky lafiny. (Ary aza manahy fa ny mpanasa vava dia tia ny mpanasa vilia tanteraka.)
$ 16 ao amin'ny Amazon
6. Telestrations aorian'ny maizina
Alao an-tsaina ny lalao iray an'ny TELEFAONINA fa tsy tokony hibitsibitsika (sy diso fanolorana) fehezan-teny samy hafa fa ny mpilalao kosa no misarika azy ireo. Misafotofoto? Hanazava izahay. Ny mpilalao tsirairay dia samy manana ny rakipeony nofafana sy teny miafina izay tsy maintsy hosoratany. Raha vantany vao nanao ny doodle tsara indrindra izy ireo dia mandalo ny bokin-dahatsorin'izy ireo mba hahazoana ny vinavinan'ny olona manaraka. Mitohy izany mandra-pahatonga ny sary hamorona azy ho faribolana feno ary ho hitanao ny fandehan'ny zavatra tsy mety sy hafahafa eny an-dalana. Ity lalao ity dia tsara indrindra rehefa nahazo sakafo hariva niandry tao anaty lafaoro ianao satria 15 minitra fotsiny ny fihodinana tsirairay. Ho an'ity kinova aorian'ny maizina ity dia antenao ny hatsikana ho an'ny olon-dehibe, koa aza lalaovina tsy nahy amin'ireo zanak'olo-mpiray tam-po aminao izany.
Tianay ny lalao karatra, saingy indraindray izy ireo dia mety ho sarotra ny milalao miaraka amin'ny vondrona iray satria be loatra ny lalàna tsy maintsy arahana. Ampidiro ity lalao mora takarina sy haingana ity izay tsy maintsy ataon'ny mpilalao rehetra dia ny mihiaka ny zavatra voalohany tonga ao an-tsaina isaky ny sokajy nomena. Toy izao ny fiasany: Mpilalao telo na maromaro no mifandimby manao karatra ary mamadika azy ireo. Rehefa mifanitsy ny karatra roa dia mila miantsoantso ohatra ny olona na zavatra ao anatin'io sokajy manokana io ny mpilalao (toy ny rima miaraka amin'ny booze). Tsy avela averina.
$ 15 ao amin'ny Amazon
8. Kittens manapoaka
Ny fanontana ankafizin'ny fianakaviana amin'ity lalao ity no tetik'asa tohana indrindra amin'ny tantaran'ny Kickstarter, saingy azo antoka fa tsy mety amin'ny filalaovan'ny renibeko ity kinova ity. Mazava ho azy fa fandraisana stratejika ny rosiana rosiana izay tanjona dia ny tsy hisoritana ny sarin'ny Kode Exploding Kitten, amin'izay hamaranana ny lalao. Ka ahoana no anaovanao an'izany, hoy ianao manontany? Ampiasao ny Defuse Cards (toy ny tondro laser sy yoga saka) hanakorontanana ny saka na ny karatra fanovana lalao hafa (toy ny fitsipahana ny anjaranao).
30 $ ao Amazon
9. Taboo misasakalina
Mety hainao amin'ny lalao nentim-paharazana ny Fady izay toerana isarihan'ny mpilalao karatra ary tsy maintsy faritan'izy ireo izay voasoratra ao aminy nefa tsy mampiasa mpandika teny mahazatra. Amin'ity kinovan'ny alina ity dia mampiasa teny maminavina amin'ny lelany ny mpilalao ary misy valiny mihombo aza. Ohatra, miezaha mamaritra ny fitifiran'ny vatana nefa tsy mampiasa ny teny hoe booze, kibo, milelaka, hoditra na minono. Tsy dia mora loatra, sa tsy izany?
45 $ ao Amazon
10. Olona ratsy
Mitovy amin'ny Ny Lalao Voting , ity hetsika fety ity dia hampiharihary izay ataon'ny namanao Raha ny marina mieritreritra anao. Mifandimby mamaky karatra fanontaniana ny mpilalao ary avy eo mifidy izay mifanaraka amin'ny famaritana. Miaraka amin'ny karatra fanontaniana toy ny hoe, Iza no mahazo karama be loatra amin'ny zavatra ataony? ' ary Azo inoana fa lasa ampondra zava-mahadomelina amin'ny fotoana sasany amin'ny fiainany? ity dia lalao ho an'ny namana akaiky ihany.
$ 40 ao amin'ny Amazon
11. Jenga Giant - Lalao fahaiza-manao fanontana fianakaviana
Manana namana amin'ny BBQ any ivelany? Tohizo ny fety raha mbola mahandro miaraka amin'ireo lalao goavambe Jenga ireo ny burger. Ny sakana tsirairay dia mitovy habe amin'ny sandrinao, izay midika fa ny stack rehetra dia mety hahatratra mihoatra ny dimy metatra ny haavony. Tahaka ny kinova kely ihany, ny hevitra dia ny mametraka ireo sakana amin'ny andalana telo, ny sosona mifandimby mitsivalana sy mitsangana. Ny mpilalao tsirairay dia mila manala sakana iray avy amin'ny stack ary mametraka azy eo amboniny, nefa tsy miteraka ny zavatra rehetra hianjera.
$ 118 ao amin'ny Amazon
12. Ilay seza mafana
Efa te-ho amin'ny seho lalao amin'ny fahitalavitra ve ianao? Ity ary ny zavatra tsara manaraka. Jereo hoe iza amin'ny namanao no mahalala anao tsara indrindra amin'ity lalao mahafinaritra ity. Mba hilalaovana dia misy olona iray mipetraka eo amin'ny seza mafana isaky ny boriboriny ary tsy maintsy mamaly fanontaniana momba ny tenany (toa Inona no holazain'ny vatako fasana? na Inona no manana fahefana hampihetsi-po ahy eo noho eo? ). Ireo mpilalao hafa koa dia tsy maintsy mamaly ilay fanontaniana mitovy amin'ny hoe izy ireo ilay olona eo amin'ny seza mafana, ary avy eo manandrana maminavina ny valiny marina. Fanamarihana: Ity lalao ity dia tsy atolotra ho an'ireo izay manana zavatra hafenina.
13. Unicorn tsy miovaova
Voantso ho toy ny lalao karatra stratejika izay handrava ny fisakaizanareo ... fa amin'ny fomba tsara, ity no atolotra ho an'ny 14 taona no ho miakatra ary afaka mandray mpilalao valo. Ny olona voalohany nanangana tafika misy unicorn fito dia mandresy nefa mety hamadika ny namanao sy ny fianakavianao ianao handehanana any. Te handray zavatra hafa? Zahao hoe t fonosana fanitarana NSFW izy .
$ 13 ao amin'ny Amazon
Spymasters roa mpifaninana no mahafantatra ny mombamomba ny maso miafina 25, fa ny mpiara-miasa aminy dia tsy mahalala afa-tsy ny anarany fotsiny. Mampiasà fambara iray amin'ny teny tokana, ny mpitsikilo dia tsy maintsy manandrana ny mpiara-miasa aminy hamantatra ny teny rehetra ao anaty latabatra izay mifanaraka amin'ny lokony amin'ny takelaka kely izay izy ireo ihany no mahita azy. Araraoty tsara, ary ny ekipanao dia afaka mamoha teny vitsivitsy mifandraika aminy indray miaraka. Raha tsy izany dia mety maminavina zavatra ho an'ny ekipa hafa ny ekipanao — na ny ratsy kokoa, vinavina ilay mpamono olona, ​​amin'izay dia hamarana ny fihodinana.
15. Manao ahoana ?!
Ptionary Nihaona Karatra manohitra ny maha-olombelona amin'ity lalao ity izay tsy maloto fotsiny - tena mandoto tokoa. Ny mpandray anjara dia misafidy andian-teny sy teny ratsy 375 samihafa hitaona eo amin'ny solaitrabe na hanao fihetsika raha misafidy izany ianao. Raha afaka maminavina ilay teny ny mpiara-miasa aminao dia mandroso amin'ny efamira miloko mifanaraka amin'izany ianao. Fa angamba tsy hilalao ity amin'ny fisakafoanana hariva amin'ny lehibenao.
35 $ ​​ao Amazon
16. Ao anaty kitapo
Tsy maintsy mieritreritra haingana ianao raha te handresy ity lalao ity izay tapaka telo. Voalohany, misafidy karatra iray ny mpilalao ary milazalaza ny ao anatiny — tsy miteny ireo teny ao amin'ilay karatra. Amin'ny fihodinana faharoa dia tsy maintsy mampiasa tsotra ny mpilalao teny iray hilazana izay ao anaty karatra. Ary ho an'ny dingana farany, ny mpilalao dia manao zavatra ara-batana izay ao anaty karatra. Mampihaika? Ie. Tena mahafinaritra? Miloka ianao.
$ 28 ao amin'ny Amazon
17. Manao sary tsy misy fahamendrehana
Izany no mitranga rehefa avadinao ho an'ny olon-dehibe irery ny Pictionary. Mifidiana karatra iray ary asaivo maminavina ny sasany ny namanao tena Teny sy andianteny NSFW mifototra amin'ny kanto. Ny ekipa afaka mamantatra ny sangan'asa mahafinaritra anao talohan'ny fotoana dia mahazo ny teboka.
18. Don't Mahazo!
Miantso ny pranksters rehetra. Ity lalao fety ity dia mizaha toetra ny fahaizanao mandingana amin'ny fanomezana anao asa enina hotanterahina nefa tsy fantatry ny mpilalao hafa fa anisan'ny lalao izy ireo. Mba handresena ny lalao dia fenoy ny telo amin'ireo enina voatanisa eo amin'ilay karatra nefa tsy tratra. Ny ampahany tsara indrindra? Azonao atao ny manandrana ireo fanamby madinidinika ireo (toy ny fahazoan'ny mpilalao iray hafa hahalasa dimy anao indroa ao anatin'ny iray andro na hahatonga ny mpilalao hamaky fehezanteny iray amin'ny boky) na dia efa vita aza ny fety. Iray amin'ireo lalao afaka mitohy mandrakizay io.
Izahay dia mandray Charades amin'ny ambaratonga manaraka. Mametraka karatra amin'ny lohany ny olona iray (miaraka amin'ny fehiloha snazzy mazava ho azy) rehefa manandrana mamaritra ny fambara ao anatin'ny 90 segondra ny ekipany. Manomboka amin'ny kolontsaina pop ka hatramin'ny asa, fidio eo amin'ny sokajy fito mba hitsapana ny fahalalanao. Azonao atao ve ny mamaritra ny influencer, koma sakafo na esports alohan'ny fotoana fohy?
$ 14 amin'ny Amazon
20. Kapohio izay!
Ity boaty napetraka ity dia manana fanamby 160 (eny, 160) samihafa hanandramana ho mpilalao solo, duo na ekipa. Manomboka amin'ny fandanjalanjana ny zavatra eny an-dohanao ka hatrany amin'ny fanipazana fiaramanidina taratasy, misy lalao iray any ankafizin'ny rehetra. Izy io dia miaraka amin'ireo sombin-javatra rehetra ilainao (aka token, kaopy, baolina, dice, chopsticks, memo pad, refy fandrefesana ary fameram-potoana) ary karatra fiasa hitsapana ny fahaiza-manao rehetra ao amin'ilay boky.
Raha niteraka i Pictionary sy Telefaona dia ity lalao sary ity. Misafidiana eo anelanelan'ny andianteny 240 (toy ny hoe 'very in Ikea' na 'Sarin'ankohonana tsy mendrika') ary manomboka manaova sary ny doodleo. Vantany vao vita ianao dia ampitao amin'ny olona manaraka izany mba hahalalany azy ary soraty eo amin'ny solaitrabe ny valiny. Ny olona fahatelo dia mila manoritra ny valiny ary mitohy ny tsingerina mandra-pahatongany any amin'ilay olona voalohany indray. Ny tanjona dia ny hitovizan'ny sary voalohany sy farany (fa aleo tsorina fa ny ampahany mahafinaritra dia ny mahita ny sary farany miala tanteraka amin'ny voalohany).
sarimihetsika romantika anglisy indrindra
Mifandraika: Lalao Virtual Happy Hour 8 hilalaovana (satria izany no ataontsika ankehitriny)
Sokajy Vaovao Momba Ny Lamaody Marika Momba Ny Herinaratra Vehivavy Pets
toro-hevitra ho an'ny fanaraha-maso volo latsaka
ny fomba fiainana tsotra
Lisitry ny olon-tiany sarimihetsika Hollywood 2013 sarimihetsika
sarimihetsika tantaram-pitiavana hol Hollywood 10 ambony
Torohevitra hatsaran-tarehy natao an-trano ho an'ny hoditra mamirapiratra
marika roller derma tsara indrindra